Gudida Dugsiga Sare ee 26ka Juun ee UK oo Afur iyo Casho sharafeed ku qaabiley aqoonyahan Dr Axmed Xuseen Ciise iyo Macalin Cabdisalaan | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Gudida Dugsiga Sare ee 26ka Juun ee UK oo Afur iyo Casho sharafeed ku qaabiley aqoonyahan Dr Axmed Xuseen Ciise iyo Macalin Cabdisalaan
Published on June 15, 2017 by sdwo · No Comments
Xaafad ka mid xaafadah galbeedka London ayaa waxaa gudida dugsiga 26ka juun ay Afur iyo Casho ugu Sameeyeen Dr Axmed Xuseen Ciise iyo macalin ka mid macalimiintii soo maray iskuulka 26ka juun ee magaalada Hargeysa C/salaan .
Kulunku wuxuu daarnaa sidii Dugsiga loo tayeen lahaa waxbarashadiisa. Dr Axmed Xuseen Ciise Oo ah maamula jaamacad Abaarso oo imikan wada dhakhtar weyn oo duleedka Hargaysa laga dhisyo oo maalin dhowna la furi doona. Ayaa wuxuu sheegay Dr Axmed in uu Iskuulka 26ka juun uu ka caawin doono wax yaabo badan siiba ardayda fasalka afraad sida luqada iyo It ga.
Waxaa i yaguna halkaa ka hadalay gudida juun Oo iyan u balan qaaday in ay gudida hawalah dhakhtarka wada in ay la shaqayn doonaa wixii hawl ah ee ay u qabankaraan Dr Axmed iyo hawsha uu wado. Kulankuna wuxuu ku dhamaaday Guul iyo farxad iyo hawsha fiican ee Dr Axmed u hayo dadka iyo dalkaba. Sidaana waxaa noo sheegay Gudoomiye cabdi wahaab xaaji xasan.
Dr Axmed Xuseen Ciise ayaa ayaa golahan gudida isuukan 26ka Juun uu ku caawiyey 15 bug.